Tsoahy avy irery ny paosin-dakozia an-dakozia ao an-dakozia
Home / Fitaovana an-dakozia / Sintomy ny fako an-dakozia / WOWOW Faucet famafazana aotom-baravarankely
FANAJORA FAMPIAM-PIVAROTANA FAHAFAHANA FAMPIASA VOLA FAMPIASA VOLA
naoty 4.67 avy tany 5 mifototra amin'ny 3 mpanjifa naoty
Ho an'ny fangatahana dia tokony hofidina ambonimbony ny faucet an-dakozia, ary tokony ho lava ny fantson'ny rano. Tsara indrindra ny manitatra any ambonin'ilay tatatra ary tsy tokony hirehitra amin'ny rano izany. Raha misy fantsona rano mafana ao an-dakozia, dia tokony tokony ho avo roa heny io karazana gripe io. Mba hahafahana mameno ny filàna isan-karazany, dia esory ny kiraro mainty an-dakozia azo atodinaina 360 ° amin'ny ankapobeny.
Esory ny faucaux an-dakozia
Tsoahy ireo faucets an-dakozia mahagaga tsy fahita firy. Ireo karazana saka-boary mavesatra ireo dia mety ho ny gros kely ho an'ny lakozia kely indrindra azonao raisina eny an-tsena. Nefa na izany aza dia manolotra anao fitaovana maro be izy ireo. Ny tena mampiavaka ny fisintahan'ny WOWOW ny fobom-bolo any an-dakozia dia ny volon-trondro lava izay ahafahanao manatratra ny zoron-janon-tsoratry ny lakozia sy manodidina anao. Indrindra rehefa manana dobera an-dakozia roa ianao dia manintona anao ny fahatongavana rehetra izay mila izany. Ny faucine an-dakozia etsy an-daniny dia manana spout fohy kokoa. Ny lohany manaparitaka dia mijanona ao anaty spout, saingy zah raha hitanao izany. Hahazo tombony amin'ny sakeli-drano lehibe kokoa ianao.
Tombontsoa lehibe hafa amin'ny famoahana kiraro any an-dakozia dia ny famolavolana 3-tsipika tokana izay tena maharitra. Mora ny mamadika ny faucet 360 degre. Ny faucine an-dakozia dia efa somary minimalistic ihany mba ahafahana manome alàlana anao malalaka any an-dakozia. Io fisintonana kely vita amin'ny kisoa io dia tsy hanakana na inona na inona. Saingy raha mihodina an'io vera io ianao any amin'ny lakozia 360 degre, dia hidirana tanteraka ao amin'ny lakozian'ny lakozia ianao amin'ny fotoana rehetra, tsy misy sakana. Io mekanika io dia vita amin'ny fitaovana maharitra, noho izany dia ho mandrakizay ihany koa.
Ny solika voahosotra varahina dia manintona ravina any an-dakozia
Ny faran'ny mainty amin'ity fantsom-bolam-bolo ity dia tena miavaka, ary tsy ho hitananao io karazam-pahamoriana io amin'ny haingo any an-dakozia. Azonao atao ny manao ny endrika lakoziao fa tsy manam-paharoa amin'ny lokon'ny gropy an-dakozia. Ny fantsom-bolam-baravaran'ny WOWOW dia vita amin'ny alimo varahina. Amin'ity fomba ity dia toa mitovy amin'ny telefaona retro. Izany dia manome ny lakozian'ny lakozia anao fa tena hikasika manokana. Miaraka amin'ny fahatapahan-jaza mainty dia manome fahatsarana ho anao koa ny lakoziao. Ary mazava ho azy io dia mateza, noho izany dia voaro mandritra ny fotoana maharitra ny poketra ao an-dakozia.
Alohan'ny hanapahanao ny poketra ao an-dakozia dia tokony hisaina lalina ianao alohan'ny hanapahanao fanapahan-kevitra. Ny fikarohana dia naneho fa ny gripe amin'ny lakozia dia iray amin'ireo teboka manan-danja ao an-dakozia. Noho izany, ny mason'ny olona dia voasarika ho any amin'ny sakamalaho ao an-dakozia. Izany dia milaza aminao amin'ny fisafidianana amim-pahendrena ny gripo an'ny lakozia. Toa mety hahazo fiatraikany lehibe amin'ny gripe any an-dakozia ianao. Vokatr'izany, midika izany amin'ny fomba tsara, fa amin'ny fomba ratsy ihany koa. Azo antoka fa azonao omena lakozia lehibe miaraka amin'ny faucet an-dakozia anao ny lakozia. Amin'ny lafiny iray, rehefa mandray fanapahan-kevitra tsy mety ianao dia mety mampihena ihany koa ny fandravanao ny lakozia. Amin'ny WOWOW dia tianay ny manome anao faucets tsara indrindra ho an'ny lakozia ao an-dakozia.
Ny vidiny mora dia misintona faucet ao an-dakozia
Rehefa mandany vola be amin'ny fanamboarana an-dakozia ianao, dia maniry ny hahatanterahana ny zava-drehetra. Te hanangana ny lakozia nofinofinao ianao, ny lakozia izay efa nanofanianao foana. Mba hahatonga ny lakozia nofinofinao dia zava-dehibe ny fampidirana ireo faucà an-dakozia ao amin'ny famolavolana an-dakozia voalohany. Raha ny voalaza, ny grosika an-dakozia dia ampahany manan-danja amin'ny famolavolana ao an-dakozia, ary noho izany dia tokony ho tafiditra hatrany am-piandohana. Saingy, mpamorona an-dakozia maro no tsy tafiditra ao aminy, ary avelao ho anao ny mividy ity singa ity mba hividianana misaraka. Na izany aza dia zava-dehibe ny fisafidianana tsara ny poketra ao an-dakozia mba hamoronana singa tsy misy dikany miaraka amin'ny haingo amin'ny lakozia.
Amin'ny lafiny iray, ny fahafantarana fa ny poketra an-dakozia dia tsy tafiditra ao amin'ny famolavanao an-dakozia, dia mitondra tombony: azonao atao ny misafidy vidiny tsara indrindra ho an'ny vola azonao amin'ny tsena. Tsy miankina amin'ny mpivarotra an-dakozia ianao izay afaka manao avo roa heny na avo telo heny amin'ny vidin'ny foitra ao an-dakozia. Rehefa misafidy kiririitra an-dakozia ianao, dia afaka misafidy mariazy ao an-dakozia tadiavinao. Amin'ny WOWOW ianao dia mandoa vidiny marina ho an'ny grositra famoahana an-dakozia, ary noho izany dia safidy tsara indrindra ho anao sy ny kitapom-bolanao.
Misintona faucet an-dakozia ny rano mandeha
Ity fisintonana kisendom-bolan'ny WOWOW ity dia manasongadina rano marobe izay misy modely roa: mandeha sy manondraka. Amin'ireo fomba fanamboarana rano ity dia azonao atao ny manasa, mameno, na manasa zavatra ao anaty fandroana ao an-dakozia. Raha amboarina miaraka amin'ny aérisialy ABS manamboatra ny talohan'ny famoahana an-dakozia dia manome antoka rano mikoriana sy maharitra izy io. Ankoatr'izay, ity toetoetra manokana ity dia ahafahanao mihinana rano betsaka. Ity aerator ity dia manavotra anao amin'ny 50% amin'ny fampiasana rano izay tena ho hitanao amin'ny volanao. Ny aoteraly dia azo esorina fotsiny, na madio na hanolo.
Ambonin'izany, ity baiko avo lenta ity dia vita amin'ny mpamatsy varahina matevina miaraka amina vy vita amin'ny vy, ary satroka vy vy. Noho ireo fitaovana kalitao avo lenta ireto dia mety hanohitra ny harafesina sy ny tara ny valizy entona ao an-dakozia. Ny baoritra misy seramika dia drip-malalaka mba hanomezana fampiononana farany anao amin'ny fampiasana ity gropy amin'ny lakozia ity. Satria ny lokon'ny rano dia vita amin'ny vy vy koa, dia manamboatra faritra manohitra fipoahana izy ary tsy handrovitra sy hikoropaka. Ity hosoka rano ity dia hisintona mora foana amin'ny toerany tany am-boalohany. Izy io dia afaka mahatohitra tsindry rano avo lenta raha tsy misy olana.
Ny fampigadinana dia manintona faucet an-dakozia
Ity boaty famoahana an-dakozia ity dia azo ampiharina amin'ny fampiasana ara-barotra ihany koa. Noho ny fahatapahan-jaza mainty manavaka azy dia mora maharitra ny harafesina sy manotrika. Noho izany dia manolotra kalitao maharitra ela. Vokatr'izany, ny WOWOW dia afaka manolotra anao fe-potoana 5 taona. Satria ny ankamaroan'ny mpamatsy akora ao an-dakozia dia manome fotoana iray mandritra ny 1 taona, ny WOWOW dia tena mitondra fiovana eto. WOWOW dia mihoatra ny fenitry ny indostria rehetra, ary voamarikao amin'ny lafiny rehetra amin'ity fisintonana lakana ao an-dakozia ity. Ny kiraro misy anao any an-dakozia dia voatana ho antoka koa amin'ny alàlan'ny antoka 90 andro famerenam-bola. Amin'izany fomba izany dia tsy mampidi-doza ianao miaraka amin'ity faucette an-dakozia ity. Ny tombony azo amin'ny talenta ao an-dakozia ao anaty fehintsoratra iray: • Manome fahantrana amin'ny lakozia rehetra
• menaka mainty retro mihosotra vita amin'ny alimo
• Ny famoronana minimal
• Misintona hosotra rano ny hosotra rano
• vita amin'ny akora vita amin'ny varahina sy kalitao avo lenta
SKU: 2310501Q Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Sintomy ny fako an-dakozia Tags: Fitaovana savoka an-dakozia, Toro-tanana Pull, Drafitra fitsaboana
16.8 X 11.4 X 3.5 santimetatra
Pullau Faucet an-dakozia
Esory ny Sprayer
Fitaovana etona sy famafazana
Takelaka iray tokana mahazatra
*** P R2021.02.09
miaraka amin'ity sprayer ity dia mety tsara ny manasa lovia na vilany. kanto ity loko ity, ary tsy mora ny mahazo tasy na dian-tànana. Mieritreritra aho fa hividy iray hafa ho an'ny reniko.
M *** R2021.03.16
Faucet tsara e! Nanana faucet avo be teo anoloan'ny varavarankelin'ny lakozia izahay. Nanisy fantsona anatiny fotsiny izahay ary mila faucet ambany. Lavorary io ary sanganasa mavesatra sy mavesatra. Ny hubby (izay afaka mametraka na inona na inona) dia nilaza fa mora be ny mametraka azy ary mora kokoa ny mametraka noho ny faucet teo aloha. Tiako ny farany vita amin'ny mainty ary toa mahatalanjona amin'ny fantsom-by vy. Faly be izahay ary tena hividy indray. Natahotra aho sao ho kely loatra izany nefa toa tonga lafatra! Misaotra anao amin'ny adidy lehibe sy mavesatra ary vita tsara! Ary mahatalanjona ny vidiny!
L *** ny2021.05.18
Faucet adidy mavesatra vita tsara, manana fantsona ampy hahatratra ny manodidina ny filentehana izy, ary koa misy bokotra famafazana / fikorianana eo an-tampon'ny tahony hahafahanao mifamadika. Ny lanjan'ny faran'ny fantsona (ambanin'ny fantsakana) dia manamora ny fihemoran'ny fantsom-pohy (tsy manosika ny fantsom-panafody intsony) .Faly aho amin'ity fividianana ity…